I-Semalt Expert Iyazi indlela yokuCima ukuThatyelwa koGawulayo kwiindawo ezikhungulayo
Ugaxekile logalelo luye lwajikeleza ngeenyanga kwaye luchithe inani elikhulu lewebhu. Ngaba usanda kukhangela i-akhawunti yeGoogle Analytics kwaye ufumene into engaqhelekanga kuyo? Kwiinyanga ezizayo, iDarodar, iLoveVitaly, kunye noBlackhatworth baye balonakalisa ezininzi iiwebhsayithi. Ukuthunyelwa kwabo kwendlela yokuhlala isetyenzisiwe kwaye ayigqibekanga. Namhlanje siza kukuxelela iindlela ezimbalwa zokukhusela ugaxelo logalelo kwiGoogle Analytics naseDarodar. I-spam yokudlulisa phambili iye yajikeleza iinyanga, kwaye kufuneka ukuba uvile ezininzi malunga nayo kwi-intanethi. Ukunyaniseka, kukukhohlisa ukufumana indawo yakho yezithuthi kunye nokutshabalalisa isikhundla sayo kwi-injini yosesho - ipad mini camera mount.
Ukukhutshwa kobuchwephesha bokudlulisa u-spam kuyimfuneko. Kule nto, kufuneka ulandele ezi nyathelo ezilula kodwa ezimangalisa ezichazwe ngu-Artem Abgarian, ubuchwephesha okhokelayo ukusuka kwi-12 (Semalt .
# I-Step 1: Qoqa uluhlu lwee-subdomains ze-spam kunye nesizinda
Isinyathelo sokuqala kukuhlanganisa uludwe lweenkalo zogaxekile kunye needesi-subdomains. Kufuneka wenze uluhlu lweemimandla ezikuthumele ukuthunyelwa kobuxoki. Zama okusemandleni akho ukubiza zonke izizinda ezixhatshazwa kule ngxaki. Emva kokuba wenze njalo, unokubambelela lula idilesi ze-IP kwaye ungatshintsha izibalo zakho ze-Google Analytics.
# Isicatshulwa sesi-2: Ukungabandakanyi iBots
Kubalulekile ukukhuphela yonke i-bots ngelixa ulungiselela uluhlu lokuthunyelwa kogaxekile. Akukho nto yokudideka malunga nokuba i-bots zizinto ezahlukeneyo kunye nokuthunyelwa kogaxekile yinto enye..Ngaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kufuneka ukhethe inketho ye-Views ukuba ungabandakanyi i-bots ukusuka kuhlu. Emva koko, kufuneka uphewule phantsi, uqinisekise ukuba uphelile yonke i-bots efanelekileyo kuloluhlu.
# I-Step 3: Yenza iMboniselo yokuCoca
Makhe ndikuxelele apha ukuba le nyathelo ikhetho. Kuthetha ukuba unokwenza okanye awukho kwaye kuxhomekeke kwimfuno yakho nokuqonda ukugalelwa kogaxekile. Ukuba ufuna ukudala iikopi zokujonga, kufuneka udale izihlungi kunye neekopi zazo ezininzi kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics. Khetha imimandla kunye needesi-subms ezifumana imbonakalo yokukhohlisa, kwaye zenze iikopi ezininzi kuzo zonke iindawo.
#Step 4: Yenza i-Filters ukuVimba iiNdawo zokuBhenela
Kulula ukudala izihlungi ukuvimba iindawo zokudlulisa. Ukuba uneendawo ezininzi kwaye ufuna ukudala izihlungi ezininzi, olu khetho lukulungele. Kungenako ukudala iifayile ezihlukileyo kuzo zonke i-subdomains. Yiya kwiCandelo Lamaqhosha onke kwaye ubiza ezo zihlungi. Khetha ukhetho lweeNdawo zeFayile kwaye ungabandakanyi i-bots kwaye uqhubeke udala izihlungi ezahlukeneyo kwimimandla eyahlukeneyo.
#Step 5: Lindela ngaphambi kokuqinisekisa ukuba ukuthunyelwa kwendlela ithintela
Emva kokuba ulandele amanyathelo angentla, kufuneka ulinde ixesha elithile ukuqinisekisa ukuba ukuthunyelwa kogaxekile kuvaliwe okanye akunjalo. Uya kuba nokubona ukuphucula kwiimpawu zakho zeGoogle Analytics. Emva kokuba izifayile zidalwa, ukuthunyelwa kogaxekile kususwa kwiwebhusayithi yakho ngokuzenzekelayo.
Ngaphambi kokuphela kwesi sihloko, sinike uluhlu lwemithombo yogaxekile ukuze sibe nombono wokuthi kufuneka uhlale kude ne-blackhatworth.com, uchumi.com, darodar.com, ilovevitaly.com, bestwebsiteawards.com. Ukuba iwebhusayithi yakho ibonisa i-100% yezinga lokuhlawula, ungafuna ukutshintsha izicwangciso kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics.